Somali / Somalice | Kurangâh
Sadece Somali / Somalice listelendi!
Xarfaha hore waa la soo sheegay Macnahooda, Kuwana waa Aayadaha Kitaabka iyo Quraanka cad.
Wax badanbay tamanin (Jeclaan) kuwii Gaaloobay (Aakhiro) inay Muslimiin ahaadaan (adduunkii).
ka tag ha cuneen hana raaxasyteene Hana Shuqliso yididiilo way ogaan doonaane,
Magaalo la halaago oo kasta waxaa u sugnaaday Wakhti la yaqaanno.
Kamana hor marto umadi Ajasheeda (wakhtigeeda) Kamana dib marto.
Umana soo Dehinno Malaa'igta xaq mooyee lamana sugeen Gaalada (markaas).
Annagaa soo dejinnay Quraanka annagaana Dhawri.
waxaan u dirray hortaa (rasuullo) Ummadihii hore.
Rasuul kasta oo u yimaaddana waxay ahaayeen kuwo ku jeesjeesa.
saasaana u galinaa (Gaalnimada) quluubta dambiilayaasha.
mana rumeeyaan Quraanka waxaana tegay (hor maray) sumaddii «Jidkii» kuwii horreeyey.
haddaan uga furro korkooda irrid samada ooy ahaadaan kuwo kora
waxay odhan lahaayeen waxaan uun la awday (La tiray) aragyadannadii, waxaabanse nahay qoom la sixray.
waxaan yeellay samada buruuj (Meelo) waxaan u qurxinnay kuwa dayi (eegi).
waxaana ka dhawray shaydaan la tuuray «fogeeyey» dhammaantiis.
mid dafa maqalka oo danab cad raaco mooyee.
dhulkana waan fidinay waxaana ku ridnay «sugnay» dhexdeeda Buuro, waxaana ka soo bixinay wax kasta oo Miisaaman.
waxaana idiinka yeellay dhexdiisa nolol iyo waxaydaan arzaaqi karin.
waxaan agtanada khasnadihiisu «kaydkiisu» ahayn ma jiro, umana soo dejinno qaddar la ogyahay mooyee.
waxaana dirnaa dabaysha oo Tallaasha (Daruurta) waxaana ka soo dajina samada Biyo aan idinku waraabinno idinkoo ahayn kuwo ka keydsan kara (gudhidda).
annagaa wax looleeyna waxna dilla, anagaana wax dhaxalla uun (u hadha).
waxaana ognahay kuwiinna hor maray waxaana ognahay kuwiina dib maray.
Eebahaana isagaa soo kulmin dadka waana falsame oge ah.
annagaana ka abuuray dadka dhoobo doorsoon.
Jaankana (Jinniga) waxaan ka abuuray mar hore Naar samuum leh (Kulayl).
Xusuuso markuu ku yidhi Eebahaa malaa'igta Anugu waxaan ka abuuri Dad dhoobo doorsoon.
Ee markaan ekeeyo kuna afuufo dhexdiisa Ruuxdayda ugu dhaca Sujuud.
wayna Sujuudeen malaa'igtii dhammaan oo Kulansan.
Wuxuuna yidhi (Eebe) Ibliisow maxaad leedahay oodan u noqonin kuwa Sujuuda.
Wuxuuna yidhi ma ihi Mid u sujuudi dad aad ka Abuurtay Dhoobo doorsoon.
Korkaagana waxaa ah Lacnad tan iyo Maalinta Abaal marinta (Qiyaamada).
Wuxuuna yidhi Eebow i sug tan iyo maalinta La soo bixin dadka.
Tan iyo maalinta Wakhtiga la yaqaan leh.
Wuxuuna yidhi Ibliis Eebow i baadiyayntaada Darteed waxaan u Qurxin dhulka Dhexdiisa waana Dhumin dhammaan.
Addoomadaada cibaadada kuu kali Yeelay mooyee (lana doortay).
Eebe wuxuu yidhi kaasi waa Jid igu toosan (oo layska abaal marin).
Addoomadayda (toosan) Kuma lihid xujo Cid Ku raacday oo kuwa Baadida ah ka mida Mooyee.
Jahanamaana yaboohoodu yahay (inta dhunta) Dhammaan.
Waxayna leedahay todoba irridood oo irrid Kastana waxay leedahay Qaddar loo qaybiyay (oo Ibliis iyo Colkiisa ah).
kuwa Eebe ka dhawrsadana waxay gali Janooyin iyo Ilo (durduri).
waxaana la dhahaa ku gala Nabad galyo iyo Aaminimo.
kumana taabto jannada dhesdeeda dhib xageedana lagama Bixiyo.
iyo in Cadaabkaygu uu yahay Cadaabka daran uun.
Ugana waran dadka Martidii (Malaa'ig) Nabi Ibraahim.
Markay u soo galeen kuna Dhaheen salaan Kuna yidhi waanu idinka cabsan.
ooy Dhaheena ha cabsan Waxaanu kuugu Bishaarayn Wiil cilmi yeelane.
Wuxuuna ku yidhi Ma waxaad ii bishaaraynaysaan Anoo odaynimo Itaabatay, Maxaad iigu Bishaaraynaysaan.
Waxayna dhaheen waxaanu Kuugu Bishaarayn Xaq ee ha noqonin Mid quusta.
Wuxuu yidhi Xaalkiinnu muxuu yahay Kuwan la Soo dirayaw.
Waxayna dhaheen waxaa naloo Diray Qoom Danbiilayaal ah xagood.
Haweenaydiisa mooyee oo noqon Kuwa ku Hadhi (Halaagga).
Wuxuu yidhi Idinku waxaad Tihiin Qoom aan la Garanaynin.
Waxayna dhaheen saas ma aha ee Waxaannu kuula Nimid waxay Shakisanaayeen (Halaagoodii).
Waxaana kuula nimid Xaq, runna waan sheegaynaa.
Ee guuri Ehelkaaga qayb Habeenka ka mida Socona Gadaashooda yayna soo Milicsan Ruux ka Mida (Dib) kuna socda meeja Laydin Faray.
Waxaana yimid dadkii Baladka oo bishaaraysan (aragga martida).
Wuxuuna yidhi kuwan waa Martidaydii ee Ha igu ceebaynina.
kana dhawrsada Eebe hana i dullaynina.
Waxayna dhaheen Miyaanaan kaa Reebin Caalamka (imaad marti galido cidna).
Cimrigaagee iyagu Baadibay ku Wareersan Yihiin.
Waxaana qabatay Qayladii qorrax soo baxa.
Waxaana ka yeellay korkoodii hoostooda Waxaana ku soo daadinnay Korkooda Dhagaxyo Naar ah.
Arrintaasna calaamooyin baa ugu sugan Kuwa Fiirfiiriya (Fikira).
Arrintaasna calaamad yaa ugu sugan kuwa Xaqa rumeeyay.
Waxayna ahaayeen Qoomkii kaynta Daalimiin (Qoomkii Nabi Shucayb).
Waana siinay Aayaadkanagii waxayna ahaayeen Kuwa xageeda ka jeedsada.
Waxaana ahaayeen kuwo ka qota Buuraha Guryo aamina.
Waxaana qabatay Qaylo Aroortii.
Waxna uma tarin waxay Kasbanayeen.
Samooyinka iyo Dhulka iyo waxa u dhaxeeyana waxaan Xaq ahayn umaanan abuurin Saacaduna way iman ee iska saamax saamixid quruxsan.
Eebahaabaa ah abuuraha cilmiga lehe.
ee ha u taagin indhahaaga waxaan ugu raaxaynay qaybo ka mida. hana u murugoon una raarici (Jilei) garabkaaga (macaamiladooda) Mu'miniinta.
waxaadna dhahdaa anugu waxaan uun ahay u dige cad.
sidaan ugu soo dejinay Cadaab kuwii isu dhaarsaday (Dhibka xaqa).